IHighlanders Izangqikilana leCaps United Kunkezo yeZNA Charities Shield
Iwembu leHighlanders Football Club.
Iqembu le Highlanders lizangqikilana lele CAPS United kufinal eyenkezo ye Zimbabwe National Army Commander’s Charities Shield ngoMgqibelo enkundleni ye Barbourfields.
Akubizwa ozwayo kusasa eMagumeni lapho okuyabe kudibene khona inkunzi zomdlalo iqembu le Highlanders lele CAPS United wona ayabe elwisa ukuphakamisa inkezo ye ZNA Commander’s Charities Shield.
Lumdlalo ugobhozisa amathe njalo umqeqetshi weqembu le Highlanders u Erol Akbay uthi kuzakuba ncane indawo ngoba womabili lawa maqembu edlala kuhle kulezinsuku.
Iqembu le Highlanders linqobe ele FC Platinum nge 3 ka 0 kusigaba se semi-final ikanti ele CAPS United litshaye ele Dynamos nge 3 ka 1.
Iqembu elizanqoba lizathola inkulungwane ezilitshumi lambili zamadola eMelika kuthi elizakukha phansi lizathola inkulungwane eziyithoba minwe mbili zamadola aseMelika njalo.
Imali ezabhadalwa yizibukeli izaphathisa abafelokazi, intandane kanye lamalunga ebutho alimala esemsebenzini.
Iqembu leCaps United.
Zombili iHighlanders le CAPS United zilakho ukudlala zingela abanye abadlali bazo ababizwe kuqembu lesizwe lona elizangqikilana leqembu le Zambia ngeSonto esigodlweni iHarare emdlalweni wokuzwan amandla.
Kuqembu le Highlanders kubizwe unozinti uAriel Sibanda, imvimbi uPeter Muduhwa kanye lo mgadli uPrince Dube. Kuqembu le CAPS United kubizwe unozinti uEdmore Sibanda, imvimbi uDennis Dauda kanye labadlali besiswini senkundla uRonald Chitiyo kanye lo Devon Chafa.
Kolunye udaba olumayelana lomdlalo wenguqu, inhlanganiso ye Delta Beverages izaqhubekela phambili isekela imidlalo ye Premier Soccer League ngemali njalo isivumelwano leso ngeseminyaka emithathu.
Inkampani ye Delta ifake izigidi ezedlula ezintathu kumidlalo ye PSL njalo ngomnyaka owodwa izafaka inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa.
Iqembu elizaphakamisa inkezo lizathola inkulungwane ezilikhulu ikanti kubunjwe umncintiswano omutsha ozadibanisa iqembu eliyabe liphakamise isicoco se PSL leqembu elizaphakamisa inkezo yeChibuku.
Sikhangele umdlalo wenqindi: Ophethe ibhanti le World Boxing Council kusigaba se silver welterweight njalo eyisizalwane selizwe le Zimbabwe uCharles Manyuchi kusasa kuzamele evikele isicoco sakhe lapho edibana lo Quadratillo Abduqaxorov oyisizalwane selizwe le Uzbekistan.
UManyuchi ubeyingqungquthela kulesisigaba ngomnyaka ka 2014 njalo enganqoba kusasa ulakho ukuthola ithuba lokunqindana labadlali abalodumo emhlabeni jikelele.
Lumdlalo uzadlalwa phakathi kwamahlandla alitshumi lambili njalo imbiko evela khonale kwele Singapore ithi uManyuchi enganqoba ulakho ukuthola ithuba lokulwa lesizalwane selizwe leMelika uKeith Thurman yena onguye ophethe isicoco se WBC world welterweight.
Udaba Esilethulwe NguJoesph Njanji
Iqembu eleFC Platinum Selikhokhela Kungalane yePSL
Abe Bhilithani Bathola iVoters Roll Abanengi eZimbabwe Bengakayitholi
Amabandla Ezombusazwe Aqhubeka Ebanga Izikhundla Zokuncintisa
Umanyano kaMujuru Uthembisa Uzulu Umbuso Wezabelo